salli lai chikeko nepali sex story - Indian Girls Nude XXX Images
salli lai chikeko nepali sex story
salli lai chikeko nepali sex story salli sanga chikeko sex story.salli sanga masti gareko.salli lai jabarjasti chikeko,salli lai party mah chikeko,salli ko boobs ra puti ,salli lai hotel mah chikeko,top sex stories,best sex stories
एक रात म ११ बजे तिर ब्युँझे र ट्वाईलेट गए । ट्वाईलेटबाट बाहिर निस्केर कोठा तिर जाँदै थिए , सुशिलाको कोठाम बत्ती बली रहेको देँखे । मैले उसको ढोका बाट चिहाएर हेरे , सुशिला त नसुति खाटमा बसि रहेको रहिछन । अनि म उनको कोठामा छिरे र सोधेँ , “के भयो सुशिला , किन नसुतेको ?” उनले भनिन , “खोई निद्रै लागेन , कता कता डर लागि रहेको छ । किन हो किन ? तपाईलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भने एक छिन म सँग बस्नुहोस न ल ।” मैले हुन्छ भने र उनको खाटमा खुट्टा तिर बसे ।
उनि शिरक ओढेर बसि रहेकी थिईन् । मौसम चिसो चिसो भएकोले मलाई पनि अलि जाडो महसुस भई रहेको थियो । उनीले थाहा पाईछन क्यार , उनले भनिन , “तपाईलाई जाडो भए जस्तो छ , शिरक ओढ्नुहोस न ।” मैले “हुन्छ” भने अनि उनको छेउमा बसेर शिरक ओढे । म कहिले पनि केटि सँग यसरी बसेको थिईन । मलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन थाल्यो । दुबैजना चुप चाप बसि रहेको थियौ , अचानक सुशिलाले मलाई अङ्गालो हालि र मेरो छातीमा टाउको राखेर सुकसुकाउन थालि । मैले “के भयो ?” भनेर सोँधे । उनले “घरको , आमा – बुवाको , भाई – बहिनीको धेरै याद आयो ” भनि । त्यस पछि मैले पनि उनलाई अङ्गालो हाले र उनको ढाँडमा हात ले सुमसुम्याउन थाले । केहि बेरमा मलाई पनि असह्य भयो र उनको ओठमा चुम्बन गर्न थाले । उनी पनि मलाई चुम्बन गर्न थाली । उनको ओँठ बिस्तारै चुस्न थाले र मेरो जिब्रो ले उनको जिब्रो खेलाईदिन थाले । उनी स्वाँ – स्वाँ गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । बिस्तारै बिस्तारै उनको शरीर शिथील हुँदै गयो । त्यस पछि मैले बिस्तारै मेरो हात उनको दुधको पोका तिर सार्न थाले । टि-शर्ट बाहिर बाटै दुधको पोका र मुण्टा माड्न थालेँ । शुरुमा त डर लागि रहेको थियो , रिसाउने पो हो कि भनेर , तर मेरो कामको कुनै प्रतिकार नगरेको हुनाले मैले पनि साहस गरेर बिस्तारै उनको टि-शर्ट खोल्न खोजे । तर पनि केहि भनिनन् र मैले उनको पुरै टि-शर्ट खोलि दिए । अब उनको दुधको पोकालाई केवल रातो ब्रा ले मात्रै छोपेको थियो । ब्रा बाहिर बाटै मैले उनको दुधको पोका माड्न थाले । त्यस पछि बिस्तारै ब्रा को हुक पनि खोलिदए र टेबल तिर फ्याँकिदए । अब उनको छाति को भाग पुरै नाङ्गो थियो । मैले बिस्तारै उनी तिर हेरे , उनि आँखा बन्द गरेर चुपचाप बसीरहेकी थिईन । अब सुशिलाको दुईटै दुधको पोका मेरो हाथमा थियो । मैले बिस्तारै बिस्तारै दुधको मुण्टा माड्न थाले । उनि सुस्केरा लिन थालिन । एकछिन हातले खेलाए पछि उनको मुण्टो चुस्न थाले , बिस्तारै टोकिदिए । “आईय्या , दुख्यो ।” भनेर कराउन थालि । फेरि हातैले खेलाउन थाल्यो । यता मेरो लाडो पनि ठन्किसकेको थियो । जीवनमा पहिलो पटक मैले यस्तो अनुभव गरेको थिए । जे होस साथीहरूसँग कहिले काँहि BLUE FILM हेर्ने गरेकोले अलि अलि आईडिया थियो । त्यस पछि मैले सुशिलाको पाईन्ट तिर हात लगे र उनको पुती खेलाउन खोजे । तर जिन्सको पाईन्ट भएकोले राम्ररी छुन सकिन । अनि बिस्तारै पाईन्टको बटन खोल्न थाले । तर सुशिलाले “नाई ! पाईन्ट नखोल्नु न ” भनि । तैपनि म मानिन र जबरजस्ती खोल्न थाले । “केहि पनि हुन्न क्या , एक छिन त हो नि । नत्र भए म तिमी सँग बोल्दिन नि !” मैले भने । त्यस पछि सुशिला केहि बोलिनन् । बिस्तारै पाईन्टको बटन र चेन खोलिदिएँ र पाईन्ट फुकालिदिए । सुशिलाले रातो पेन्टी लाएको रहेछ । यसो पुती तिर हात लगेको त हातनै चिसो भयो । अनि मैले सोधे , “पेन्टीमा मुतेको हो ?” उनि लजाउँदै भनिन , “कहाँ हुनु , आफै पानी झरेको नि । केटीहरूको त पानी झर्छ नि , थाहा छैन ? ” “ए हो र !” मैले भने । अनि पेन्टी पनि खोलिदिएँ । जिन्दगीमा पहिलो पटक मैले कसैको पुती यसरी हेर्न पाएको थिए । कालो भुत्ला वरिपरि अनि बिचमा रसाएको सानो पुती , कति लोभ लाग्दो थियो । BLUE FILM को सिन सम्झन थाले र उनको पुती भित्र औला हालिदिए । “आह!!! – आह!!!” भन्दै सुशिला कराउन थालि । मलाई पनि खपि नस्क्नु भएर आयो । मैले पनि मेरो पाईन्ट र कट्टु खोले र उनको हात मेरो लाडोमा राखिदिए । “ओहो ! कस्तो कडा भएको ? कति मोटो ?” सुशिलाले भनिन । अनि मैले सोधे “तिमीले अरुको पनि लाडो देखेको थियौ पहिला ?” “केटा केटीहरूको त सानो हुन्छ त ।” सुशिलाले भनिन । “त्यो त हो नि , तर उमेर बढ्दै गए पछि लाडो पनि त ठुलो हुँदै जान्छ नि त । ” मैले भने । त्यस पछि म सुशिलाको माथि चढे र उनको पुतीमा मेरो लाडो छिराउन खोजे । शायद पहिलो पटक भएकोले होला , घरि यता – घरि उता चिप्लिन थाल्यो । पुतीमा छिरे-नछिरेको थाहा नै पाउन सकिन । अनि सोधेँ ,”भित्र छिर्यो ?” “छैन ।” सुशिलाले भनिन् । त्यस पछि मैले उनको खुट्टा फाट्न लगाए अनि हातले मेरो लाडो उसको पुतीको मुखमा राखे र बिस्तारै छिराउन खोजे । अहिले चाँहि छिरेछ , “आईय्या ! दुख्यो ! पोल्यो ! निकाल्नु न ।” भनेर सुशिला कराउन थालि । मलाई पनि डर लाग्यो र लाडो बाहिर निकाले । BLUE FILM मा थुक लगाएको देखेको थिए , अनि लाडोमा थुक दले र फेरि बिस्तारै छिराउन थाले । लाडो अलि चिप्लो भएछ क्यार सजिलै सित सुशिलाको पुतीमा छिर्यो । सुशिला बिस्तारै बिस्तारै कराउन छाडी , अनि मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै मेरो लाडोलाई भित्र बाहिर गर्न थाले । अब त सजिलै सँग छिर्न थाल्यो । यसो पुतीमा हेरेको त अलि अलि रगत पनि आई रहेको देखे र सेतो पानी पनि झरेको देखे । शायद सुशिलाको पुतीबाट पानी झरेकोले गर्दा होला , मेरो लाडो सजिलै पुतीमा छिर्न थाल्यो । पहिलो पटक कुनै केटीलाई मैले यसरी चिक्दै थिए । करिब ३-४ मिनेट चिके पछि म छाँगाबाट झरे जस्तो भए र मेरो लाडोबाट माल झर्यो । म शिथील भए र मेरो लाडो पनि नरम हुन थाल्यो । अनि म फेरि सुशिलाको दुध चुस्न थाले र सोधे , “सुशिला , कस्तो महसुस भयो ?” सुशिलाले रुन्चे स्वरमा भनिन , “रमाईलो भयो , तर अलि अलि पुती पोलिरहेको छ । मजा आयो ।” मैले भने , “पहिलो पटक यस्तै हो , फेरि गर्दा दुख्दैन । अब फेरि भोलि पनि गर्ने ल ! ” उनले “हुन्छ” भनि र म खाटबाट उठे अनि कपडा लगाउन थाले । सुशिलाले पनि लुगा लगाईन
← salli lai chikeko sex story (nepali sex story)	salli lai blackmail gari sex nepali sex story →